Mkpado: Akwụkwọ ntanetị Google | Martech Zone
Tag: Akwụkwọ ozi Google
Numberics na enye ohere ka ndị ọrụ iPhone na iPad mepụta ma hazie dashboards ha jikọtara ọnụ site na nchịkọta nke ndị ọzọ. Họrọ site na ọtụtụ narị wijetị ndị e bu ụzọ mee iji wuo nnyocha nke nchịkọta weebụ, njikọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọganihu oru ngo, ọfụma ahịa, ntanetị nkwado ndị ahịa, njikwa akaụntụ ma ọ bụ ọbụlagodi ọnụọgụ site na ntanetị gị na igwe ojii. Atụmatụ gụnyere: Ngwaọrụ edepụtara aha nke ụdị dị iche iche gụnyere ọnụọgụ ogologo, akara akara, eserese achịcha, ndepụta mkpirisi, na ndị ọzọ Mepụta ọtụtụ
Agara m na Chamber of Commerce dị na mpaghara a na mgbede iji kwurịta mmeghari ndị ọhụrụ. Islọ ahụ bụ nzukọ dị egwu, mana ọ bụ ezigbo ihe atụ nke ọrụ ebe mmegharị bụ ihe obi nke nzukọ ahụ. Ekwenyesiri m ike na ụlọ ahụ nwere ike ịkwụsị ego na ndị na-esonye n'afọ mbụ. Agbanyeghị, mgbe afọ ahụ gachara, uru ha na - abawanye - na uru ọ bara na Chamber Member anaghị ala. Abalị taa ka m kwuru okwu